समाचार – Page 15 – TajaNepal
बहसFebruary 20, 2019
ईश्वरी वाग्ले जनताले सांसदलाई ठूलो जान्ने–सुन्ने भन्छ । सांसदको गरिमा जनताले होइन, ऊ आफैँले राख्ने हो । तर नेपालको राजनीति यति घिनलाग्दो छ, जहाँ सांसदले जे गरे पनि कानुन नलाग्ने सन्देश गएको छ । राज्यले…
EnglishFebruary 20, 2019
पार्टीको गुटबन्दी एकताको बाधक काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन खडा गरिएको कार्यदललाई हिजो अध्यक्षद्वयले फागुन ९ गतेसम्म बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलन इमानदारीपूर्वक सम्पन्न…
आर्थिकJuly 17, 2018
काठमाडौँ । ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको एयरपोर्ट काण्डमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको छानबिन समितिले देखाएको सक्रियता अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन । आफ्नो कर्मकाण्ड सफल पार्न आफ्नै भरियाको हत्या गर्ने गोरे चूडामणि उप्रेतीका भाइ…
दुर्गन्ध सुरु भो प्रहरी र सशस्त्रमा
समाचारJuly 17, 2018
काठमाडौँ । सङ्गठनको प्रमुख बन्ने बेलामा अघिल्ला आईजीपीहरूले भन्दा स्वच्छ र निष्पक्ष सङ्गठन चलाउने गुड्डी हाँक्ने प्रहरीका आईजीपी पद पाएको छ महिनामै भ्रष्टाचार जस्तो दुर्गन्धित कर्ममा सक्रिय भएका छन् भन्दा पत्याउनै मुस्किल तर समाचार सत्य…
कम्बल ओढेर घ्यू खानेका अगाडि
समाचारJuly 10, 2018
होटललाई घर भाडा लगाउनेको हारगुहार ! काठमाडौँ । सम्झौता एउटा, कारोबार अर्को गरेर कमाइरहेका ठगहरू काँगे्रेस, एमाले र माओवादीका नाममा चम्किन थालेको धेरै भयो । बसपार्क क्षेत्रका होडल, लज, रेष्टुराँका मालिकहरूको चोरी धन्दाले घर मालिकहरू…
जनपद र सशस्त्रका आफ्नै पीडा
काठमाडौँ । असार २९ गते अवकाश पाउने ५ डीआईजी उत्तम कार्की, पवन खरेल, छविलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह, शरदचन्द्रको बहिर्गमनसँगै नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजी बढुवा हुने छन् । एआईजी पदमा पुष्कर कार्की, मनोज न्यौपाने, ठूले राईको…
कहिले सफा हुन्छ वागमती !
काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र हुँदै बग्ने वागमती नदीको सफाइका लागि हरेक हप्ताको शनिवार स्वयंसेवकहरूको सक्रियताले ३० टनदेखि ५० टन फोहोर सङ्कलन गर्छ । वागमती सफाइको विषयले राष्ट्रिय प्रचार पाएकै छ । तर त्यो वामगतीमा फोहोर…
यसरी ग¥यो सर्वोच्चले इन्साफ !
भ्रष्टहरू न्यायपरिषद्को घेरामा काठमाडौँ । न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मा पाएको व्यक्ति पदीय गरिमा भन्दा लोभी भयो, भ्रष्ट भयो भने सम्मानित अदालत बदनाम हुन्छ । भीएलएनएको लुटका नायकलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन बस्नेतले रू. १०…
सुरक्षा सतर्कता सरकारको पहिलो मुद्दा
बहसJuly 10, 2018
मन्त्रीहरू अलमलिए, कार्यकर्ता आक्रोशित काठमाडौँ । सरकारले समृद्धि र विकासको एजेन्डा सफल बनाउने पहिलो मुद्दा सुरक्षालाई बनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीका बीचमा बारम्बार भएका छलफलमा राष्ट्रको सार्वभौम अखण्डता र राष्ट्रिय…
नागरिक अगुवाको अनिकाल
काठमाडौँ । मौका पर्दा पार्टीको टिकट लिने र चुनाव लड्ने दमननाथ ढुङ्गानाको नागरिक समाज र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जागिर खाने सुशील प्याकुरेलको नागरिक समाज एकै खालका हुन् । उद्योगमा लगानी गर्ने उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत् चोरी…